Warbixin cusub ayaa tusinaysa ICE waxay u adeegsataa dallaaliyeyaasha xogta si ay ugu xidhaan shuruucda quduuska ah - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Warbixin cusub waxay tusinaysaa ICE waxay u adeegsataa dallaaliyeyaasha xogta si ay u xidhaan shuruucda quduuska ah
Dukumeentiyadu waxay muujinayaan sida ICE u isticmaasho xogta LexisNexis si ay ugu dhowaato sharciyada Colorado; Saraakiisha fulinta sharciga Colorado waxay ku fadhiyaan guddiga maamulka ee LexisNexis
Denver, CO - Laanta Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamku (ICE) waxay qandaraas la gashay shirkad xog-ururin ah ujeeddada cad ee ah in laga leexiyo siyaasadaha gurracan ee Colorado, taas oo loogu talagalay in laga hortago iskaashiga sharci fulinta ee hawlgallada masaafurinta.
Qandaraaska, cusub oo maanta shaaca laga qaaday, waxa ay u ogolaataa ICE in ay ka hesho xogta xidhidhka wakhtiga dhabta ah xafisyada sheriffs, iyada oo u digaysa wakiilada ICE halka ay ku sugan yihiin soogalootiga jeelasha degmada. Sababtoo ah mar dambe kuma tiirsanaan karaan shaqaalaha fulinta sharciga inay si toos ah u bixiyaan macluumaadka ballan-qaadka xabsiga, ICE beddelkeeda waxay iibsanaysaa xogta iyadoo adeegsanaysa dullaaliinta xogta shirkadda LexisNexis.
LexisNexis, oo leh mid ka mid ah kaydadka macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ugu weyn adduunka, ayaa qandaraasyo dhowr ah la leh ICE, oo ay ku jiraan $22.1 milyan oo qandaraas ah si loo bixiyo macluumaadka shakhsiyeed ee boqolaal milyan oo qof oo ku nool dalka oo dhan. LexisNexis wuxuu isu geeyaa balaayiin diiwaanka shakhsiyeed oo ay ka iibiso wakaaladaha sida ICE, wadaaga magacyada, ciwaanada, taariikhda deynta, diiwaanada musalsalka, taarikada shatiga, xogta taleefanka gacanta, iyo in ka badan.
Our Warbixin cusub, oo cinwaan looga dhigay "Sabotaging Sanctuary: Sida Dallaaliyeyaasha Xogta u Siiyaan ICE Gelitaanka Dhabarka dambe ee Xogta iyo Jeelasha Colorado, "waxay tusinaysaa sida ICE ay ula heshiisay shirkadda dallaalka xogta ee Appriss Solutions, oo hoos timaada LexisNexis, si ay u hesho xogta xidhitaanka xabsiga nidaamka digniinta xabsiga Colorado ee loo yaqaan Yimid, oo ay maamusho Sheriffs County ee Colorado. Nidaamku wuxuu u digayaa wakiilada ICE isla markaaba marka qof kasta oo ku jira liisaska bartilmaameedka ee wakaalada lagu qoro jeelasha degmada, taasoo u ogolaanaysa ICE inay xidho marka la sii daayo.
Nidaamyada digniinta xogta xabsiga dhigista sida Colorado's ayaa ka jira ku dhawaad ​​gobol kasta, macnaha albaabka danbe ee ay samaysay ICE waxa laga yaabaa inuu jiro dalka oo dhan. Colorado's HB19-1124, sida qawaaniinta quduuska ah ee dalka oo dhan, waxaa loola jeedaa in laga mamnuuco fulinta sharciga gobolka inay caawiyaan hawlaha masaafurinta ICE. ICE waxay si cad u magacawday siyaasadaha qoduuska ah ee dalka oo dhan si ay u dhiirigeliso baahideeda software LexisNexis:
"Isbeddellada siyaasadda ama sharci-dejinta awgeed, ERO [Hawlgallada Dhaqangelinta iyo ka saarista] waxay la kulantay kororka tirada hay'adaha fulinta sharciga iyo dawlad-goboleedka ama dawladaha hoose ee aan wadaagin macluumaadka ku saabsan xabsiga dhabta ah ee muwaadiniinta ajnabiga ah ee ku dhashay ICE. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la helo adeegyada sirdoonka cadaalada iyada oo loo marayo LexisNexis' Appriss Insights."
Warbixintayadu waxay sidoo kale muujinaysaa iskahorimaadyo muuqda oo xiiso leh oo ka dhex jira saraakiisha fulinta sharciga ee Colorado: Ugu yaraan laba sarkaal oo hadda ama hore ah -Vincent Line, Madaxa Hawlaha ee Xafiiska Sheriff County ee Denver, oo kormeera labada jeelasha Denver, iyo Matt Lewis, Sheriff hore ee Degmada Mesa- dul fadhiiso guddiga kaydka xogta LexisNexis taas oo siisa xogta ICE. The shaqaalaha fulinta sharciga ee lagu soo oogay dhaqan gelinta siyaasadda quduuska ah ee Denver waxay ku fadhiyaan guddiga shirkadda qandaraaska u siisay inay ka caawiyaan ICE inay jabiso siyaasadahaas.
LexisNexis waxa kale oo ay si toos ah heshiis ula gashay magaalada Denver, oo saxeexday a $750,000 qandaraas adeegyada xogta ah 2020 U doodayaashu waxay yiraahdeen waxaa laga yaabaa inay jebiso Sharciga Mudnaanta Dhaqangelinta Badbaadada Dadweynaha Denver ee 2017.
"Tani waa caddaynta shay aan ka shakinay muddo dheer: ICE waxay qandaraas kula jirtaa shirkadaha tignoolajiyada iyo xogta, sida LexisNexis, gaar ahaan si ay ugu dhowaato sharciyada quduuska ah," ayuu yidhi. Jacinta González, agaasimaha ololaha sare ee ololaha #NoTechforICE ee Mijente. "Wakiilada ICE mar waxay ku tiirsanaayeen bilayska si ay nooga caawiyaan inay na soo qabtaan, na qabtaan, oo ay na masaafuriyaan. Hadda, shirkadaha tignoolajiyada, iyagoo iibinaya xogtayada gaarka ah, ayaa iyaga caawinaya. "
"Muddo sanado ah xubnaha bulshadu waxay tuhunsanaayeen la wadaaga macluumaadka ICE," ayuu yidhi Siena Mann, maamulaha abaabulka iyo ololaha ee Isbahaysiga Xuquuqda Immigrant ee Colorado. "Dadku waxay na weydiiyaan: sidee ku ogaadeen inay halkan i soo qaadaan? Sidee bay ku ogaadeen ciwaankayga ama magacyada xubnaha qoyskayga? Warbixintani waxay muujinaysaa sida saxda ah ee LexisNexis ay u ururinayso xogta ilaha ganacsiga, laakiin sidoo kale ka socota sharci fulinta si ay u sahamiso bulshooyinkayada. "
"Natiijooyinkani waa kuwo walaac leh, laakiin nasiib darro maahan wax la yaab leh," ayuu yidhi Pamela Reséndiz Trujano, agaasimaha fulinta ee Colorado Jobs With Justice. "Tani waa tusaale kale oo taariikh dheer ah oo sharci fulinta isticmaalaya doolarka dadweynaha si ay ula shuraakoobaan shirkadaha faa'iido doonka ah, taas oo uga sii dareysa booliska badan ee bulshooyinka midabka leh iyo beegsiga qoysaska soogalootiga ah ee masaafurinta. Saraakiisha maxalliga ah waa in ay joojiyaan xiriirka ay la leeyihiin dallaaliyeyaasha xogta sida LexisNexis kuwaas oo si xun u isticmaala helista xogta oo dhibaato u geysta bulshooyinkayada."
"Tobankii sano ee la soo dhaafay, soogalootiga Colorado waxay sugeen ilaalinta aasaasiga ah iyo adeegyada si loo hubiyo nolol barwaaqaysan oo naftooda ku jirta gobolka, mid ka mid ah siyaasadahaas ayaa ah ilaalinta xogta shakhsi ahaaneed," ayuu yidhi. Ana Temu Otting, isuduwaha ololaha socdaalka ee ACLU ee Colorado. Hase yeeshee, shirkadaha tignoolajiyada ayaa dhisaya agabka loo adeegsado ilaalinta, xabsiga, iyo masaafurinta bulshooyinkayada, taasoo sii kordhinaysa kalsoonida bulshada iyo dawladda. Sheriffs, Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamka, iyo shirkadaha tignoolajiyada waa in ay u hoggaansamaan sharciga gobolka ee ilaalinaya xogta dhammaan Coloradans."
"Saamaynta qaboojinta ee cabsida ku xeeran xogta loo isticmaalo in lagu silciyo xubnaha bulshada ee aan sharciyeysnayn waxay saameyn dhab ah ku leedahay helitaanka daryeelka caafimaadka ee soogalootiga Colorado," ayaa yidhi Miriam Ordoñez, maamulaha goobta ee Hindisaha Caafimaadka Macaamiisha ee Colorado. "Dhaqdhaqaaqyada ka-hortagga ah sida kuwa lagu sheegay warbixintan waxay ka celiyaan shakhsiyaadka ay khusayso inay helaan daryeel caafimaad iyo taageero maaliyadeed oo lagama maarmaan ah. Xubnaha bulshada ee aan sharciyeysnayn waxay mudan yihiin xaqa ay u leeyihiin inay dareemaan badbaado ay u raadsadaan daryeel caafimaad oo ah xuquuqaha aasaasiga ah ee bini'aadamka mana aha inay ka baqaan in xogtooda lala wadaago si loo waxyeeleeyo iyadoo lagu salaynayo xaaladdooda socdaalka."